गोदावरीमा तयार भयो देशकै ठूलो सभागृह, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने (फोटो-भिडियो) – Nepal Press
गोदावरीमा तयार भयो देशकै ठूलो सभागृह, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने (फोटो-भिडियो)
२०७८ वैशाख २४ गते १९:३५
ललितपुर । गोदावरीमा निर्माणाधिन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सभाहलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
करिब ३ हजार क्षमताको सभाहल निर्माणको काम ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय बबरमहलले जनाएको छ ।
बैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको सो सभाहलको शुक्रबार शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले निरीक्षण गरेका छन ।
भवनभित्र २ वटा भिभिआईपी कक्ष बनाईएको छ । आयोजनाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले यही बैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ई. रमेश प्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।
उदाउँदो सूर्यको आकृतिमा बनाईएकाले सभाहललाई गोदावरी सनसाईज नाम दिईएको सचिव ई. सिंहले बताए ।
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित ४३ रोपनी १५ आना क्षेत्रफल जग्गामा बनाईएको सो सभाहलको भौतिक संरचनाले मात्रै ११ रोपनी १३ आना चर्चेको छ ।
३ रोपनी क्षेत्रफलमा आन्तरिक सडक, १६ रोपनी २ आनामा बगैचा तथा हरियाली र १३ रोपनीमा पार्किङ्ग र अन्य कार्यका लागि छुट्याईएको छ । ध्वनी अवशोषित, भुकम्प प्रतिरोधी सो सभाहलमा कम्तिमा पनि ३ हजार जना सहभागी भएर बैठक गर्न सक्ने छन् ।
केसी समानान्तर जेभी काठमाण्डौले निर्माण ठेक्का लिएको सभाहलको लागत ८१ करोड, ६ लाख ४ सय ३ रुपैया रहेको छ । सभाहल अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट १५ दशमलब ८ किलोमिटर र चक्रपथबाट ९ दशमलब ५ किलोमिटर दुरीमा रहेको छ ।
मन्त्री शाह मन्त्रालय र विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका कर्मचारी सहित सभाहलको निरीक्षणमा जानुभएको थियो ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २४ गते १९:३५
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : गण्डकी प्रदेशविरुद्ध जित निकाल्दै एपीएफ सेमिफाइनल नजिक
आगो तापेकाेदेखि हिउँ खेलेकाेसम्म
उद्घाटन सुरू हुन २ घण्टा बाँकी छँदा मञ्च बनाउने चटारो (तस्बिर/भिडिओ)
अस्तव्यस्त सिंहदरबारका १० दृश्य
रिमोट थिचेर झण्डोत्तलन गर्दै ओलीद्वारा महाधिवेशन उद्घाटन (तस्बिर / भिडिओ)
‘बर्ड भ्यू’ मा एमाले महाधिवेशन
एमाले महाधिवेशन सुरू, नारायणी किनारमा घुइँचो (तस्बिरहरु)
तिहारका लागि किनमेल गर्नेको असनमा घुइँचो (तस्बिर र भिडिओ)
श्रम सम्झौतापछि पहिलोपटक ९९ नेपाली कामदार आज इजरायल उड्दै
प्रधानमन्त्री कप फाइनल : एपीएफविरुद्ध दिपेन्द्रको अर्धसतक
बाँकेका एक वडाध्यक्ष ब्राउन सुगरसहित पक्राउ
विवेकशील-साझामा जुट–फुटको अन्तरकथा